“Walaashey oo aan sannado raadinayay ayaan albaabka igu xiga ka helay” |
“Walaashey oo aan sannado raadinayay ayaan albaabka igu xiga ka helay”
Hillary Harris iyo Dawn Johnson waxay ahaayeen labo ruux oo aan isaqoonin, hal meelna isla jooga ooh al waddo isla isticmaala – ilaa markii dambe ay Hillary ku guuleysatay raadintii ay sannado ku heysay walaasheed.
Iyadoo da’ yar ayey ogeyd Hillary in qoyska ay la joogto ay yihiin dad soo korsaday, laakiin ma aysan garaneynin meel ay u doontoi walaasheed Dawn.
Haweeneydan oo dhaggan xaafad ku taalla gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka, marnaba ma aysan fileynin inay ku nooshahay albaabka ku xiga.
“Waxaa waalidiinteyda la iga qaatay anigoo cunug yar ah. Markii aan soo caqliyeystay waxaa la ii sheegay in waalidiinteyda saxda ah ay ahaayeen dad aad u wanaagsan oo I jecel. Waxaa kale oo aan ogaaday inaan leeyahay walaalo kale, laakiin waxaan heli wayaay gabar aan hal dhinac oo waalidiinta ka mid ah walaalo ka nahay, taasoo magaceeda la yiraahdo Dawn Johnson. Sanadkii 2017-kii ayey soo dagtay guriga igu dhagan, mana aanan ka war helin inay tahay qofka aan sanado badan raadinayay, sitaa ma aannaan isbaranin”, ayey tiri Hillary.
Sidey isku heleen?
Waxaa jirtay gabar yar oo ay Hillary dhashay, taasoo ugu dambeyn si lama filaan ah, oo waliba aan ku talagal ahayn uga qeyb qaadatay inay isgartaan hooyadeed iyo habaryarteed.
Dawn oo arrintaas sharraxeysa ayaa tiri: “Markii aan guriga cusub soo dagay waxaan arkay gabar yar oo kasoo baxeysay albaabka igu xiga, taasoo magaceeda la yiraahdo Stella, waan isbarannay, mar kasta ayeyna ii imaan jirtay. Maalintii dambe waxaa ii yimid Stella hooyadeed iyo aabaheed. Kor iyo hoos ayey ii fiiriyeen, anigana waan yaabay, ka dib waxay igu dhaheen waan ku salaameynay, wayna iska laabteen. Mar kale ayey igu soo laabatay waxayna ‘igu tiri waxaan ahay Hillary, oo dariska kugu xiga ah, magaca aabahaa ma waxaa la yiraahdaa Johnson?’, ka dib waan sii wadahadalnay waxaana ogaannay inaan isku aabe nahay”.
Mr Johnson wuxuu geeriyooday sanadkii 2010-kii.
Hillary ayaa sheegtay in maalmo ka hor kulanka ay ogaatay in haweeneyda dariskeeda ah lagu magacaabo Dawn Johnson, laakiin way ka cabsaneysay inay u tagto oo ay wareysato.
Xitaa markii hore inta aysan magaca ogaanin aad bay u dhibsan jirtay in gabadheeda yar ay u wareegto guriga haweeneydaas.
Hase yeeshee seygeeda ayaa ku dhiirrigaliyay, wuxuuna u sheegay in haddii ay iyadu soo weydiin weyso uu isaga sidaas sameyn doono.
Ugu dameyn way ku dhaqaaqday tallaabadii wayna heshay walaasheed oo ay muddo aad u dheer raadineysay, aad bayna isu jecleysteen.